Botnets Or Ransomware. Inona no ratsy lehibe kokoa ho an'ny solosainao? & Ndash; Manontania fotsiny hoe Semalt
Botnets Or Ransomware. Inona no ratsy lehibe kokoa ho an'ny solosainao? - Manontania fotsiny hoe Semalt
Amin'izao fotoana izao, ny ransomware dia iray amin'ireo fiarovana lehibe indrindra amin'ny aterineto. Vao haingana, ny fanafihana WannaCryptor izay niantraika tamin'ny ordinatera 350,000 dia nahasarika fomba fijery an-tapitrisany avy amin'ny mpampiasa aterineto samihafa sy ireo mpitandro filaminana. Toy ny loza mitatao ho antsika ankehitriny izany. Na izany aza, ny mpiserasera aterineto amin'izao fotoana izao dia iharan'ny lozam-piasa mampidi-doza kokoa, ary ireto ny botnets!
Na dia tena maharary aza ny fanafihan'ny ransomware, dia hita fa farafaharatsiny. Botnets dia mamoaka ny vokany mampihoron-koditra amin'ny fomba miafina. Ity malware ity dia afaka mifehy tanteraka ny ordinatera an-tapitrisany sy ny fitaovana hafa ao anaty tambajotra.
Frank Abagnale, Semalt Mpitarika Success Manager, dia nilaza fa ny FBI dia nanombana fa ny orinasa 500 tapitrisa eo ho eo dia voan'ny aretina isan-taona. Misy milina iray misy otrikaretina miseho amin'ny aretina hafa. Ohatra, dia azo alefa amin'ny ransomware izy io ary lasa fitaovana azo ampiasaina amin'ny fizarana malware hafa. Ireo mpampiasa cyber dia afaka mampianatra mora foana ny botnet mba hizara spam, ary ny tahan'ny fahombiazana dia ho 100%. Hitranga izany rehetra izany raha mbola tsy mahafantatra izay mitranga ny tompon'ireo ordinatera. Ny manam-pahaizana sasany dia nanamafy fa ny botnets dia manana ny fahafaham-baraka amin'ny aterineto.
Nahoana no tokony hampanahy anao mihoatra noho ny ransomware ny botnets
Misy antony maro mahatonga ny botnets manapoaka loza mitatao noho ny ransomware. Tsy hita maso koa ny vokatr'ireo botnets. Azon'izy ireo atao ny mampiasa ordinatera iray malaza mba handefa spam sy ransomware hafa any amin'ny ordinatera hafa na hanao fandidiana (DOS). Afaka ampiasaina koa izy ireo mba hisintonana tambajotra. Ny tsirairay dia tokony hisalasala momba ity loza mitatao ity, ka mitadidy fa ny 50 - 70 isan-jaton'ny fifamoivoizana mailaka dia mahazatra. Anatin'ny mailaka rehetra misy atiny ratsy, 85 isan-jato dia mifandray amin'ny ransomware..
Ny tompon'ny solosaina iray mahatsiravina dia miatrika ireo karazana fiarovana maro samihafa. Ireo mpanao heloka bevava dia afaka mamafy ny fampahalalana rehetra ao amin'ny mailaka sy ny kaonty media sosialy. Ny sasany mivarotra ity vaovao ity raha ny hafa kosa mampiasa izany amin'ny tanjona ratsy toy ny mangalatra amin'ny kaontin'ny banky.
Niova ny rafitra ara-bola Botnet
Tany aloha, ny mpiasan'ny botnet dia miankina amin'ny fizarana spam mba hahazoana vola. Ny botnets lehibe toy ny Marina dia afaka mandefa spams maherin'ny 90 lavitrisa isan'andro. Saingy ny biraon'ny manam-pahefana sy ny mpitandro filaminana dia haingana dia haingon-drivotra lehibe ary hanjavona ny ankamaroany.
Nanome modely botile matanjaka kokoa ny fanavaozana ao amin'ny tontolon'ny serasera. Izao dia mampiasa ny P2P (Peer-to-Peer), modely. Araka ny aritra misy ny P2P modely, ny botsoa dia samy miasa ho mpizara ary toy ny mpanjifa. Afaka mandefa sy mandray baiko izy ireo, ary manampy izany mba hisorohana ny tsy fahombiazany.
Ny karazana robots hafa, ankoatra ny ordinatera, dia ampiasaina ihany koa. Ireo dia ny server sy ny fitaovana ao amin'ny Internet (Things) (IoT).
Ny mpanao heloka bevava dia manararaotra ny hery matanjaka amin'ny aterineto amin'ny Internet ary haingana kokoa ny aterineto hanodinana ny fifamoivoizana sy hizara spam. Ny fitaovana ao amin'ny IoT dia matetika tsy azo antoka, ary izany dia mahatonga azy ireo ho mora amin'ny botnets. Asa maro dia azo atao amin'ny fampiasana ireo 'zavatra' ireo, anisan'izany ny fanafihana DDOS. Raha jerena ny fitomboan'ny IoT, dia mampidi-doza ny fampitomboana ny asan'ny bot ao amin'ny fitaovana IoT. Voaporofo fa ho 20,8 tapitrisa ny isan'ny fitaovana ao amin'ny sokajy IoT amin'ny taona 2020.
Mety hisy computers, servers, ary zavatra hafa mety ho andevozin'ny botnets raha tsy manavao ireo fitaovana sy rafitra fiarovana ny mpanjifa sy ny fikambanana. Mba hisorohana ny lozan'ny botnets dia ny fanofanana fiarovana no tena ilaina. Rehefa fantatry ny olona ny fandrahonana, dia hahomby kokoa ny fampiharana ireo fitaovam-pandrosoana farany sy ireo fitaovam-pifandraisan-davitra. Ny mpamatsy mpamatsy aterineto dia manolotra fiarovana amin'ny botnet amin'izao fotoana izao izay manampy amin'ny fanangonana fifandraisana mampiahiahy amin'ireo mpampiasa Bot Source .